Posted on फ्रेवुअरी 13, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी
काठमाडौंबाट खाडी बुझिन्न
‘अहिलेको शताब्दीमा समाज उत्थानमा मिडियाको भूमिका अग्रपंक्तिमा छ, प्रवासमा नेपाली श्रमिकको हितलाई ध्यान राखेर समाचार दिनुहोला ।’ कतारबाट नियमित प्रकाशित कान्तिपुर प्रवास साप्ताहिकको हालै दोहामा सम्पन्न वाषिर्कोत्सवको अवसरमा शुभकामना दिँदै एकजना इन्जिनियरले भनेका थिए । पत्रिकाप्रति प्रवासी नेपालीको अगाध माया देखेर यसलाई अझै उपयोगी बनाउने जिम्मेवारी एकातिर थियो भने अर्कोतिर पत्रिकाको दुईवर्षे यात्रा सुरुवातको झल्झली याद आइरहेको थियो, जुन यात्राले हामीलाई प्रवासमा ल्याएको थियो । त्यो बेला काठमाडौंमा कान्तिपुर दैनिकको चौथो तलाको ठूलो हलभित्रको एउटा सानो कोठामा बैठक डाकिएको थियो । यो दुई वर्षअघि, ठ्याक्कै भन्नुपर्दा ०६४ पुस ४ गतेको कुरा हो । तर त्यो दैनिक पत्रिकाको नियमित बैठकभन्दा अलि बेग्लै थियो । त्यो थियो- दोहाबाट कान्तिपुर प्रवास साप्ताहिक प्रकाशन गर्ने’bout ।
त्यसको केहीअघि व्यवस्थापन र सम्पादकसहितको टोली दोहा आएर सम्भाव्यता’bout बुझेर फर्केको थियो । त्यो टोलीले खाडीमा कान्तिपुरको बजारमात्र होइन, आवश्यकता पनि रहेको निक्र्योल निकालेको थियो । त्यसैलाई मूर्तरूप दिने सिलसिलामा बैठक बसेको थियो । बैठकमा कान्तिपुर सम्पादकीय समूहका प्रमुखहरूसहित यही साप्ताहिकका लागि छुट्टाइएका हामी सातजना थियौं, जुन टिम कान्तिपुर दैनिकमै कार्यरत मध्येबाटै तयार गरिएको थियो ।
उद्देश्य लिएर लागिपरे पूरा हुन्छ भनेजस्तै यो बैठक पत्रिका सुरुवाततर्फ केन्दि्रत थियो । पत्रिका निकाल्ने निश्चित भएपछि हामी के-कस्ता विषयबस्तु समेट्नुपर्छ भन्नेमा केन्दि्रत थियौं । सम्पादकले कतारको वस्तुस्थिति, नेपालीको अवस्था, पत्रिकामा समट्न सकिने विषय आदि’bout जानकारी गराए । ‘जसले विदेशमा पसिना चुहाएर रेमिट्यान्स सहयोग गरेका छन्, उनै नेपाली ठगिएका छन्, । हो, तिनलाई हामीले टेवा पुर्‍याउनुपर्छ’, उनले भनेका थिए । त्यो बैठकदेखि नै हामी दोहामा पत्रिका निकाल्ने’bout कस्सिन थाल्यौं । पत्रिका त निकाल्ने भनियो, तर पाठकहरूले कस्तो सामग्री चाहेका छन् भन्ने प्रतिक्रिया पाएका थिएनौं । यो हाम्रो योजनामात्र थियो, जुन पाठकबाट मूल्याङ्कन हुन बाँकी थियो ।
« चुनौती पुलिसलाई रोजगारका लागि भारतीय युवा नेपालमा »